တနေ့ တနေ့တော့ ငါဝယ်နိုင်မှာပါ...(အပိုင်း၁) - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
မှတ်ချက်။ ။ယခုပို့စ်သည် လူငယ်တစ်ယောက်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်အယောင်နဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် သုတရသခံစားစေချင်ရုံပါ. . .လွန်ခဲ့တော့ june လ 20 ရက်နေ့ခန့်ကပေါ့. . .ကောင်လေးတစ်ယောက်လမ်းမပေါ်မှာလျောက်ရင်း စိတ်ညစ်စွာနဲ့အလုပ်ကပြန်လာခဲ့လေ၏~~~~ထိုအချိန်က သူ့ရဲ့လစာထုတ်ရက်လေးပေါ့ သူစဉ်းစားတယ်အင်း ငါအိမ်ကိုလည်းပေးရအုံးမယ် ငါကစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်ငါ့ဝါသနာအတွက်လည်း ငါလုပ်ချင်သေးတယ်သူထပ်စဉ်းစားတယ် အင်းငါအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရမလားမဖြစ်သေးပါဘူး အိမ်မှာလည်းငါ့မိသားစုရှိသေးတယ်အင်း ငါဘာလုပ်ရမလဲဒီအချိန်တွင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး စဉ်းစားမိလား သူ့ဝါသနာနဲ့သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတော်ပါပြီ နောက်နေ့မှပဲ ထပ်သွားတော့မယ်လေ . . .ရှေ့ဆက်အိမ်ဘက်ကိုဆက်လျောက်လာခဲ့တယ်ရလာတဲ့လစာ ၈၀၀၀၀ ကိုလက်တွင်ကိုင်ဆုတ်လာရင်းးးအိမ်အပေါက်ဝမှာရှိနေတဲ့ အမေအိုကြီးကိုပြေးဖတ်လိုက်တယ်. . .အမေ . . .သား ~ ငါ့သားလေးဘာဖြစ်ခဲ့လိုလဲ ~ ငါ့သားလေးကိုဘယ်သူတွေဘာလုပ်လိုက်လို့လဲ~~ဘာမှမလုပ်ပါဘူး အမေ ~~သား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ၀မ်းနည်းခဲ့လို့ပါ ထိုအချိန်တွင် မိဘကိုဘာမှမပြောဘဲ တိတ်တဆိတ် အိမ်ပေါ်တတ်လာခဲ့တယ်အမေချက်ပြီး အဆင်သင့်ခူးထားတဲ့ ငပိရည်နဲ့တို့စရာလေးတွေနဲ့စားသောက်ပြီး အမေ့ကိုရတဲ့လစာနဲ့ကန်တော့ခဲ့တယ်ထိုအချိန် သည် ညခင်း ၅:၃၀ ရှိနေလေပြီ~~~~သူလည်း
ရထားတဲ့ ၀န်ထမ်းအိမ်တန်းလေးမှာနေနေတော့ အိမ်ရှေ့ ထွက်ပြီး ကွက်ပစ်လေးမှာ ၁၀တန်းတုန်းက ဂုဏ်ထူးပါလို့အမေ၀ယ်ပေးထားတဲ့ ဂစ်တာအိုလေးကိုပိုက်ကာ ထွက်လာခဲ့တယ်သီချင်းလေးတွေဆိုစဉ်မှာ သူ့ရှေ့က သားအဖနှစ်ယောက် ရီမောစွာဖြင့်ထွက်လာခဲ့တယ် အဖေဖြစ်သူလက်ထဲမှာ ၁၂လက်မလောက်ရှိတဲ့ပေတံနဲ့ သားလက်ထဲမှာ ၉လက်မလောက်ရှိတဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ပေါ့ သူလည်း အင်းငါငါ့ဂီတာပဲတီးမယ်လေ ဆိုပြီး တီးနေလေရဲ့...ထိုအချိန်တွင် သားအဖနှစ်ယောက်က ဘေးက အိမ်လေ သူတို့ပြောနေတာက. . .အဖေဖြစ်သူ။ ။ သားကြိုက်ရဲ့လားကွ. . .သားဖြစ်သူ။ ။ ကြိုက်တယ်ဖေကြီး. . .အဖေဖြစ်သူ။
။ အဖေ အပြင်သွားနေတာ ဒီလိုမျိူးတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့မကြားခဲ့ဘူးဖူး မနေ့ကမှ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ရပ်ကြည့်နေတာတွေ့လိုအဖေကလည်း ကြည့်လိုက်တယ် ပြီးတော့ အဲ့ဆိုင်ထဲဝင်မေးတော့ သားကြိုက်တဲ့ ပစွည်းရောင်းနေတာတွေ့လိုက်ရတယ် သားရဲ့ သားဖြစ်သူ။ ။ ဟိုအကိုတော့သနားပါတယ်နော်အဖေဖြစ်သူ။
။ အင်း ~~~~ သူလည်း တစ်နေ့ဝယ်နိုင်မှာပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ မှာမှ မရတာတွေကို ရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်ဆိုတော့ . . .အဖေဖြစ်သူ။ ။သားအဖေပြောမယ် သားကို ၀ယ်ပေးတဲ့ Tablet ကိုအဖေ ဘာလို့ကြိုက်သွားလည်းဆိုရင်. . .Screen
Size က 9.6 Inches ဖြစ်တယ် Touch က လည်း capacitance formula ၊LCD ကလည်း ဖောပြထားခြင်းမရှိပေမယ့် Super AMOLED Display ကိုသုံးထားတယ်လို့တူနေတယ်လေAndroid
Version 4.4.2 နဲ့တည်ဆောက်ထားပြီး Internal Memory 16GB နဲ့ RAM 1GB ပါတယ်လေ CPU Quard Core1.5 ပါဝင် ပြီး Extranal Memory 32GBထိထပ်တိုးစိုက်နိုင်တယ်လေStand By ထားမယ်ဆို လအကန့်မရှိထားနိုင်ပြီး တစ်နေကုန်ဖုန်းပြော အင်တာနက်သုံး စာဖတ် ဂိမ်းဆော့ တောင် ~~~~ ဟမ်းခြင်း၊အရမ်းပူနေခြင်း၊ပါဝါ Reboot ကျသွာြး့ခင်း အစရှိတဲ့ လက်ရှိလူတော်တော်များများ စိုးရိမ်နေတဲ့ Error တွေဖြစ်တော့ဘူးလေ ဆိုင်ချင်ကောင်လေးကဆိုရင် သူ့ Tablet ကို ပါးရိုက်ပြီး ပြီးတောင်ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုပဲ တော်သေးတယ်အဖေတောင်ပါးရိုက်မခံရတာဟီး. . . သားဖြစ်သူ ။ ။အာ့ဆို သူကဈေးဘယ်လောက်ပေးခဲရလဲအဖေဖြစ်သူ။ ။ ၇၆၀၀၀ လေးသားရဲ့(ခုနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်) လက်ဆောင်တွေက ~~~~ 2600 Power Bank တစ်ခု၊SIM 1 Card၊ Bill 1 Card၊ Tablet
Book Cavar တစ်ခု၊ Accessories အစုံ၊Facebook Accountတစ်ခု၊Line,Tango,Viber,Wechat,Whatapps,Beetalk Account တွေကိုလည်း ဖွင့်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ... ပြောရမယ်ဆိုရင်သားရယ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၀၀၀၀ ဖိုးလက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော် . . .သားဖြစ်သူ။ ။ အမလေး ဖေကြီးရယ် အားရလွန်းလို့ အိမ်သာတတ်ချင်လာပြီ အဖေဖြစ်သူ။ ။အမလေး အေးပါကွယ်. . .သားဖြစ်သူ။ ။ ဖေကြီးရေ လာပြီဗျအဖေဖြစ်သူ။ ။ အဖေလည်းလကုန်ရင် နောက်တစ်လုံးသွားဝယ်အုံးမယ် သားနဲ့မလုချင်လို့ ခိခိ သားဖြစ်သူ။ ။ ဖေကြီး နော်သားဟာတော့လာမလုပါနဲ့ သားမေကြီးနဲ့တိုင်မှာအဖေဖြစ်သူ။ ။ အေးပါသားရယ် ဒါမယ့်သူတို့က အကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းတာနော် အမြဲမဟုတ်ဘူး အဖေဖုန်းဆက်ပြီး အော်ဒါတတ်ထားအုံးမှ...သားဖြစ်သူ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဖေကြီး . . .ထိုအချိန်မှာသီချင်းဆိုနေတဲ့
ကောင်လေးကြားပြီး သူလမ်းမှာစိတ်ညစ်နေတာ အဲ့ဒီ ဆိုင်က Tablet ကိုမ၀ယ်နိုင်လို့ စိတ်ညစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးခင်ဗျ
ဒီပို့စ်လေးမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေစမြဲပါ ဒါပေမယ့် နောက်လည်းအမြဲဒီပို့စ်ကိုပဲ
Upgrade လုပ်ရင် ဖုန်းရွှာပုံစံမျိူး ရေးသားအုံးမှာပါကျွန်တော့်မှာရည်ရွှယ်ချက်ရှိတယ်ဗျ ဘာလဲသိလား စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး" ငါသည် ငါတို့လူမျိူးများစက်ပစွည်းအကြောင်းနားလည်ပြီးအခြားတိုင်းတပါးလူလိမ်များမလိမ်နိုင်ပဲ ဗဟုသုကြွယ်ဝသူအဖြစ်ဖြစ်စေရမယ် " ဆိုတဲ့ရည်ရွှယ်ချက်နဲ့တည်ဆောက်ထားတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာမျိူးတွေဖတ်ပြီး အမြဲ ဖုန်းနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Knowledge တွေရလာမယ် ၀ယ်ယူသူရဲ့ ဗဟုသုတ လုံးဝပြည့်စုံသွားစေရမယ်လေမေ့တော့မလို့. . . စောစောကဆိုင်လိပ်စာလေး. . .မြောက်ဒဂုံ
ပင်လုံလမ်းမကြီး-၃၅မှတ်တိုင်အနီး- " ဆွေသဟာ Mobile Service " ဖုန်း-09-455724355 ,09-428040776သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ-နယ်မှ ၀ယ်သူများထံလည်းတစ်လုံးတည်းလည်းပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ...စာရေးဆရာ။ ။ သီဟထိုက်